Iyo yechipiri beta yeHaiku OS R1 yakatoburitswa uye uku ndiko kuchinja kwayo | Kubva kuLinux
Iyo yechipiri beta yeHaiku OS R1 yakatoburitswa uye uku ndiko kuchinja kwayo
Mushure megore nemwedzi mipfumbamwe yekusunungurwa kweiyo yekutanga beta vhezheni yeHaiku OS R1 Iyi beta yechipiri inosvika inoenderera nebasa iyo yakadzorerwa mushure mekuvharwa kweBeOS inoshanda sisitimu uye ikakwidziridzwa pasi pezita rekuti OpenBeOS, asi yakapihwa zita muna2004 nekuda kwezvikumbiro zvine chekuita nekushandiswa kweiyo BeOS chiratidzo muzita.
Kune avo vasingazive kubva kuHaiku OS, iwe unofanirwa kuziva izvo haishandisi iyo Linux kernel asi inoshandisa kernel yayo, yakavakirwa pahwaro hweyakavakirwa modular, yakagadzirirwa kukwidziridzwa kwakanyanya kuzviito zvevashandisi uye kuuraya kwakanaka kwekushandisa kwakawanda.
Iyo system inoenderana zvakananga neBeOS 5 matekinoroji uye yakanangana nekuenderana kwebhinari nezvikumbiro zveiyi sisitimu inoshanda. Minimum Hardware zvinodiwa: Pentium II CPU uye 256 MB ye RAM (Intel Core i3 uye 2 GB ye RAM yakakurudzirwa).
OpenBFS inoshandiswa sefaira system. Inotsigira yakawedzeredzwa faira hunhu, journaling, 64-bit zvinongedzo, inotsigira kuchengetedza meta tag uye akakosha marexes kuti akurumidze kusarudzwa mavari. Kuronga dhairekitori dhizaini, "B + muti" miti inoshandiswa.
1 Chii chitsva mune ino yechipiri beta vhezheni?
Chii chitsva mune ino yechipiri beta vhezheni?
Mumakore angangoita maviri kubvira pekupedzisira kugadzirisa, 101 vagadziri vakapinda mukusimudzira yeiyi beta nyowani yeHaiku umo yakagadzirira dzinopfuura zviuru mazana maviri nesere neshanduro uye yakavhara mazana mapfumbamwe ekukanganisar uye mafomu ekushandisa zvigadzirwa.
Imwe yacho ndeye kunatsiridza kuratidza kuita HiDPI, iyo inopawo iyo chiyero chakaringana chezvinhu zvekushongedza uye saizi font inoshandiswa sechinhu chakakosha pakuyera, uko zvimwe zvese zvinongedzo zvinowedzeredzwa.
Mune desktop desktop pane iyo «mini» modhi, umo panhivha isingagari muhupamhi hwese hwechiso uye inoshanduka zvine simba zvinoenderana nemifananidzo yakaiswa. Zvave zvakadaro yakavandudzwa otomatiki pani yekuvhura maitiro, iyo inowedzera saizi chete kana mbeva yasimudzwa uye imwe compact vhezheni inoratidzwa mune yakajairwa modhi.
Imwe shanduko ndeyekuti a interface yekumisikidza zvigadzirwa zvekuisa, umo mbeva, keyboard uye joystick zvigadziriso zvinosanganiswa. kunze kwaizvozvo yakawedzera rutsigiro rwemakonzo ane anopfuura matatu mabhatani uye kugona kugadzirisa zviito zvebhatani remakonzo.
Yakagadziriswa POSIX kuenderana uye yakatakura chikamu chakakura chezvirongwa zvitsva zvemifananidzo, mitambo, uye maturusi. Iyo LibreOffice, Teregiramu, Okular, Krita uye AQEMU kunyorera kuri kuwanikwa, pamwe neFreeCiv, DreamChess neMinetest mitambo.
Iyo yekumisikidza inowedzera kugona kusabvisa iyo yekumisikidza mapakeji mapakejivaripo munhau. Paunenge uchigadzirisa disk zvikamu, rumwe ruzivo nezve dhiraivha runoratidzwa, tsananguro yekushandisa kunyorera inoitwa, uye ruzivo nezve nzvimbo yemahara pazvikamu zviripo zvinowedzerwa Iko kune sarudzo inowanikwa kukurumidza kusimudzira Haiku R1 Beta 1 kusvika Beta 2.
Iyo yekupedzisira inopa kuteedzera kweMeta kiyi. Mune marongero, iwe unogona kugovera iyo Meta basa kune iyo Alt / Sarudzo kiyi iri kuruboshwe kwenzvimbo (iyo kiyi yeArt kurudyi kwenzvimbo inochengetedza chinangwa chayo).
Yeimwe shanduko inotaurwa mune ino nyowani beta vhezheni:
Iyo WebPositive web browser yakagadziriswa, yakaendeswa kune iyo nyowani vhezheni yeWebKit injini uye yakagadziridzwa kudzikisa ndangariro kushandiswa.
Yakagadziriswa rutsigiro rweNVMe madhiraivha uye mashandisiro avo seanotakurika midhiya
Yakawedzerwa uye yakatsigirwa rutsigiro rwe USB3 (XHCI). Kubhururuka kubva kumadhiza USB3 kwakarongeka uye kushanda kwakaringana nemidziyo yekuisa yakave nechokwadi.
Bootloader yakawedzerwa yeUFI masisitimu.
Basa rakaitwa kudzikamisa nekuvandudza kuita kwepamoyo. Mazhinji bugs anokonzera kutonhora kana kupaza akagadziriswa.
Network mutyairi kodhi inotumirwa kubva kuFreeBSD 12.
Chekupedzisira, kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezvazvo uye / kana kuwana mufananidzo weiyi vhezheni nyowani, unogona kuzviita kubva chinotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » Iyo yechipiri beta yeHaiku OS R1 yakatoburitswa uye uku ndiko kuchinja kwayo
Kurwira kodzero dzeNginx kunoenderera uye Rambler akaenderera mberi nematare muUSA
RISC-V yakasimbisa seL4 microkernel pane yavo RV64 processor